Santionany mety sy ny tsy mety santionany dia tsy mitovy amin'ny fampiharana; Amin'ireo tranga roa ireo, izany rehetra momba ny vato.
Santionany dia fototra ny fanadihadiana fikarohana. Mpikaroka saika tsy manontany ny fanontaniana ny olona rehetra ny kendrena mponina. Momba izany, fanadihadiana dia tsy manam-paharoa. Ny ankamaroan'ny fikarohana, tamin'ny fomba iray na hafa, tafiditra santionany. Indraindray izany santionany atao mazava ny mpikaroka; fotoana hafa tonga izany tanteraka. , Ohatra, ny mpikaroka izay mitantana ny laboratoara fanandramana amin'ny undergraduate ireo mpianatra tao amin'ny anjerimanontolo ihany koa naka santionany. Noho izany, santionany dia olana izay miakatra mandritra ity boky ity. Raha ny marina, iray amin'ireo olana fahita indrindra izay fandrenesako nomerika ny tahirin-kevitra loharanom taona dia "tsy solontena izy ireo." Ho hitantsika ato amin'ity fizarana ity, mampanahy ity dia sady tsy matotra sy fetsy noho maro be fisalasalana mahatsapa. Raha ny marina, dia milaza fa ny foto-kevitra rehetra ny "representativeness" Tsy hanampy noho ny fiheverany ny mety sy ny tsy-mety santionany. Kosa, ny zava-dehibe dia ny mieritreritra momba ny fomba dia nanangona ny antontan-kevitra sy ny fomba misy mifanavakavaka amin'izany fanangonana antontan'isa azo ravana, rehefa manao vinavina.
Amin'izao fotoana izao, ny fomba ara-indrindra ho solontena dia mety santionany. Rehefa nanangona antontan-kevitra ireo amin'ny fomba izay mety santionany efa novonoina tanteraka, ny mpikaroka dia afaka lanja ny rakitra mifototra teny an-dalana izy dia nangonina mba ho manavakavaka vinavina momba ny kendrena mponina. Na izany aza, tonga lafatra tsy mety santionany ankapobeny mitranga any amin'ny tontolo tena izy. Misy olana lehibe roa miavaka 1) fahasamihafana eo amin'ny tanjona sy ny endriny mponina mponina sy 2) tsy valinteny (ireo mihitsy ny olana izay rendrika ny asa soratra Digest fitsapan-kevitra). Noho izany, fa tsy mieritreritra ny mety santionany ho toy ny zava-misy modely izay tena zava-mitranga eo amin'izao tontolo izao, fa tsara ny mieritreritra ny mety santionany toy ny manampy, saro-takarina modely, be toy ny fomba fizika mieritreritra momba ny frictionless baolina nanakodia nidina ny faran'izay lava fiakarana.
Ny hafa ny mety santionany dia tsy mety santionany. Ny tena maha samy hafa ny mety sy ny tsy-mety santionany dia ny hoe amin'ny mety santionany amin'ny mponina rehetra manana fantatra mety ny fampidirana. Misy, raha ny marina, maro karazana ny tsy mety santionany, ary ireo fomba fanangonana antontan'isa dia lasa miha mahazatra amin'ny vanim-potoana nomerika. Saingy, tsy mety santionany manana mahatsiravina nalaza teo amin'ny ara-tsosialy sy ny statisticians mpahay siansa. Raha ny marina, tsy mety santionany dia mifandray amin'ny sasany ny tena mampivarahontsana tsy fahombiazana ny fanadihadiana mpikaroka, toy ny asa soratra Digest nandamoka (noresahina tany aloha) sy ny diso faminaniana momba ny Etazonia fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 1948 ( "Dewey nandresy an'i Truman") (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani, and Purves 2007) .
Na izany aza, ny fotoana dia ny hamerina handinika tsara tsy mety santionany noho ny antony roa. Voalohany, toy ny mety santionany efa lasa sarotra kokoa ny manao amin'ny fampiharana, ny tsipika eo amin'ny santionany mety sy ny tsy mety santionany no blurring. Rehefa misy taha ambony amin'ny tsy valinteny (toy ny misy eo amin'ny tena fanadihadiana ankehitriny), ny tena mety ho inclusions ho an'ny namaly no tsy fantatra, ary dia toy izany, mety santionany sy ny tsy mety santionany dia tsy mba toy ny maro hafa toy ny mpikaroka mino. Raha ny marina, araka ny ho hitantsika etsy ambany, na fomba fijery ankapobeny miantehitra amin'ny fomba mitovy tombany: lahatsoratra-stratification. Faharoa, nisy fivoaran-draharaha maro tao amin'ny famoriam-bola sy ny fandalinana ny tsy mety santionany. Ireo fomba tsy mitovy ampy amin'ny fomba izay niteraka olana tany aloha izay Heveriko fa misy dikany ny mieritreritra azy ireo ho toy ny "tsy-mety santionany 2.0." Dia tsy mba ho tsy mahay mandinika tsy fitiavany maizina ny tsy mety ny fomba noho ny fahadisoana izay nitranga ela lasa izay.
Manaraka, mba hahatonga izany hevitra mivaingana kokoa, aho fitsipika mety hamerina hijery santionany sy ny weighting (sampana 3.4.1). Ny hevitra fototra dia hoe fomba nanangona ny tahirin-kevitra dia tokony hisy fiantraikany ny fomba manao vinavina. Indrindra indrindra, raha ny olona rehetra tsy manana ny mitovy mety ny fampidirana, dia olon-drehetra dia tokony tsy mitovy ny lanjany. Amin'ny teny hafa, raha ny santionany dia tsy demokratika, dia ny estimations tsy tokony ho demokratika. Rehefa avy nandinika weighting, aho mamaritra fomba roa ny tsy mety santionany: izay mifantoka amin'ny weighting mba hiatrehana ny olana ny napetrapetraka Nanangona tahirin-kevitra (sampana 3.4.2), ary izay miezaka ny hametraka bebe kokoa ny fomba fanaraha-maso ny antontan-kevitra dia nanangona (sampana 3.4.3). Ny hevitra ao amin'ny andinin-teny lehibe no hazavain'ny eto ambany amin'ny teny sy ny sary; mpamaky izay te kokoa matematika fitsaboana dia tokony hahita ny ara-teknika ihany koa ny fanazavana fanampiny.